Kuratidza zvinyorwa neelebheri archiving
Paseky nad Jizerou uye EMBA spol. s ro
Paseky nad Jizerou ari mumusha Semily District gomo iri Liberec mudunhu, kumadokero Mountains Giant pamuganhu Jizera kurudyi Jizerský wangu. 249 vagari vanogara pano; dzimba dzakawanda dzimba nedzimwe zvivako zvinoshumira nhasi kwezororo rekugara. Kurutivi rwokumaodzanyemba komuguta ndeyeKrkonoše National Park, chikamu chekumaodzanyemba kusanganisira misha mikuru kusvika ku Jizera Mountains Protected Landscape Area.